Ny lalao ho an'ny ankizy Good Night, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ny lalao ho an'ny ankizy Good Night, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Indray mandeha indray, ny kely indrindra amin'ny trano dia ireo mpiaro ny lalao asehonay anao anio mba halefa maimaimpoana. Ny alina tsara dia lalao amin'ny endrika tantara izay tsy maintsy hanaovana ny kely indrindra amin'ny trano ampio ny biby rehetra hiomana alohan'ny hatory. Ity lalao ity dia natokana ho an'ny ankizy hatramin'ny dimy taona, ary azo antoka, izany dia ho iray amin'ireo fampiharana tiany indrindra alohan'ny hatory isan'andro, indrindra ho an'ireo izay lasa ady manaitaitra ny fotoana fatoriana. Ho an'ny ray aman-dreny sy ho an'ny ankizy kely ao an-trano. Ity rindrambaiko ity dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro ao amin'ny App Store fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana.
Ny mekanika ny lalao dia tena tsotra. Tsy maintsy fonosin'ireo ankizy ireo biby ary vonoy ny jiro mba hiala sasatra mandra-pahatongan'ny andro manaraka. Amin'ny alàlan'ny fitsangantsanganana ataonay, tsy maintsy milaza ny alin'ny alina isika amin'ny alika, ny kisoa, ondry, gana, ny omby, ny akoho, ny bitro ...
Araka ny vanim-potoanan'ny taona misy antsika ny mombamomba ny fampiharana dia hampiseho amintsika sary iray na iray hafa. Azontsika atao ny mampiasa ny maody mandeha ho azy, raha tsy izany dia tiantsika ny hifandray amin'ilay lalao ny zanatsika, fa ny filalaovana azy ho azy, fiasa iray izay mety hisoroka ny zanatsika tsy hatory ary hientanentana amin'ny mikasika ny iPhone, iPad na iPod mikasika ary te hitazona milalao.
Ity lalao ity dia misy amin'ny fiteny maro, toy izany koa mety ho fomba tsara ho an'ny zanatsika ny mampihatra fiteny kely alohan'ny hatory. Ny Good Night dia noforonin'i Heide Wittlinger, mpanakanto voatendry ho an'ny Oscars 2002, ho fohy fohy mihetsika, izay manome antsika antoka fanampiny momba ny kalitao kanto izay atolotry ny lalao antsika.
Tafandria mandry!€ 4,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ny lalao ho an'ny ankizy Good Night, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Tsy maimaim-poana !!!
Mandritra ny fotoana voafetra dia efa nilaza izany ny lohateny.
Ny Apple Watch 3 dia hanana efijery vaovao